« Education civique » ? | NewsMada
… Tsia, tsy diso akory ny eritreritrao fa ilay taranja ianarana any am-pianarana mihitsy io lohatenin’ny famakafakana io. « EC », hoy ny mpianatra. Io ilay dradradradraina fa haverina ho anisan’ny fandaharam-pianarana eto Madagasikara. Tsy ampy an’io « hono » ny zaza malagasy hany ka tsy mahalala fomba. Mila beazina mba ho olom-banona sy tompon’andraikitra, sns.
Ny mahavariana anefa, amin’ny fiteny frantsay ny hanabeazana ny zanaka malagasy hahalala fomba, hahafantatra ny momba azy, sns. Tsy voajanahary izany fa petatoko sy fanomezan-danja ny fomba fisainana vahiny. Ity misy ohatra iray ao anatin’ny taranja « EC » kilasy faha-4 (na taona faha-8). Mba hahatsotra ny fanazavana, aleo atao amin’ny fiteny malagasy ny fanazavana ilay zavatra hita tao amin’ny « cahier »-n’ny mpianatra.
Fanontaniana: omeo ny famaritana ny « mariazy » teo amin’ny Malagasy? Hita taratra avy hatrany fa foto-pisainana vahiny ny nakana io fanontaniana io. Tena tsy fahaizana ve sa efa domelin’ny kolontsaina vahiny? Taiza no nisy Malagasy nanao « mariage » izany? Vodiondry ny fanaon’ny Malagasy. Raha ny famaritana (définition) ny « vodiondry » indray no atao amin’ny fiteny frantsay, tsy ho vita mihitsy izany. Famaritana faran’izay tsotra: « vodiondry, fanomezan-kasina sy haja ary voninahitra ireo masoandro amam-bolana nipoiran-drazazavavy ». Mba andramo kely àry ny mandika na mitady ny hevitr’ireto teny malagasy telo ireto, amin’ny fiteny frantsay: « hasina » sy « haja » ary « voninahitra ». Aoka anefa tsy hiainga amin’ny foto-pisainana vahiny ny hanaovana ny fandikana fa ny tena hevitra marina fonosin’ireo teny ireo.
… Tahaka izany ve ny fomba hoentina hanabeazana ny zaza malagasy? Fandaharam-pianarana novolavolaina amina foto-pisainana vahiny. Tsy mahagaga raha vao mainka tsy hahalala fomba sy tsy ho tia ny momba azy rehetra (teniny, taniny, fombany, kolontsainy, sns) ny taranaka malagasy. Vokany, mora amin’ny vahiny ny hamingavinga ny Malagasy satria na ny « hasina » ananan’ny Malagasy aza, tsy fantany intsony!